Intlekele kwi-Israel yoShishino loKhenketho iza noThintelo lohambo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » I-Israel Iphula Iindaba » Intlekele kwi-Israel yoShishino loKhenketho iza noThintelo lohambo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • lomhleli • I-Israel Iphula Iindaba • iindaba • Tourism • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Umphathiswa Wezokhenketho wase-Israel u-Orit Farkash-Hacohen
Amaqela enkcubeko asuka e-United States sele ebhukishile aya kuba nakho ukuya kwa-Israyeli, kodwa akukho mntu waziyo ukuba yintoni eza kulandela kwimarike yezokhenketho engenayo kwa-Israyeli emva koku.
Ngu-Aron Rosenthal / Umgca weendaba
Iindwendwe ezivela e-US, eFrance, eJamani, e-Itali nase-Greece phakathi kwabo ngoku kufuneka bazenze bodwa xa befika
U-Israyeli wayeza kuthi ndlela-ntle kwi-COVID-19 kwaye molo kwezokhenketho, xa i-COVID-19 ibuya.
U-Israyeli wayebavalile abantu abangafakwanga ugonyo kwiindawo ezininzi, kubandakanya neesinagoge.
Nawuphi na umbono oselugcinweni lwabakhenkethi kunye nabanini bamashishini ngokufanayo abaya kwa-Israyeli baya kubuyela esiqhelweni nangaliphi na ixesha kungekudala bapheliswa sisibhengezo se-Health Ministry kule veki ukuba nge-11 ka-Agasti, wonke umntu ofikayo evela kumazwe ali-18 ongezelelweyo kuyakufuneka angene yedwa. ngaphandle kobudala babo nokuba baye bagonyelwa okanye bafunyanwa kwakhona kwi-coronavirus yenoveli.
Amazwe aza kongezwa kuluhlu "lweZilumkiso zoKuhamba ngokuQatha" yiBotswana, iBulgaria, iCuba, iRiphabhlikhi yaseCzech, i-Egypt, i-Eswatini (eyayisaziwa njenge-Swaziland), i-France, i-Jamani, i-Greece, i-Iceland, i-Itali, i-Malawi, i-Malawi, i-Netherlands, i-Tanzania. , ERwanda, eTunisia, eUkraine naseUnited States.
Into yokugqibela kolu luhlu yeyona nto ixhalabisayo kubanini bamashishini kwicandelo lokhenketho kunye nelokubuka iindwendwe. Kungenxa yokuba inani elikhulu lamaqela ebengena kweli lizwe njengenxalenye yenkqubo yokulinga, okanye ngenkqubo yeLungelo lokuzalwa, liphuma e-US.
Sele bekhona kuluhlu “lwesilumkiso sokuhamba ngamandla” yiCambodia, iColombia, iFiji, iGuatemala, iHonduras, iMongolia, iMyanmar, iNamibia, i-United Arab Emirates kunye neZimbabwe.
Kwaye u-Israyeli uvalile abemi bayo ukuba baye kumazwe ali-14- iArgentina, iBelarus, iBrazil, iSipro, iGeorgia, i-Indiya, iKyrgyzstan, iMexico, iTurkey, iRussia, uMzantsi Afrika, iSpain, i-United Kingdom, ne-Uzbekistan- ngaphandle kokuba bafumana imvume ikomiti eyahlukileyo.
Isithethi esivela kwiRente isihambisi soKhenketho, sixelele iMedia Line, “Okwangoku, i-United States lelinye lamazwe aphambili athe [athumela abantu] kwa-Israyeli njengabakhenkethi, [kwaye] ngoku ibekwe phantsi 'kweorenji ileyibhile, okuthetha ukuba bayakufuna ukuzikhetha bodwa kangangeentsuku ezisixhenxe. ”
Kwanangaphambi kwesibhengezo sikarhulumente samva nje, ukhenketho lomntu ngamnye olungenayo lwalungavumelekanga, kodwa amanye amaqela ayenikwa imvume ekhethekileyo yokungena kweli lizwe ngenkqubo yokulinga okanye ngohambo lokufunda.
Phantse i-1,500 yabakhenkethi batyelele u-Israyeli ngoJulayi ngeprojekthi yovavanyo yoMphathiswa Wezokhenketho.
"Uninzi lwamaqela avela e-US, amanye avela eYurophu, e-UK nase Mzantsi Melika," utshilo umphathiswa uxelele iMedia Line.
Isithethi seRente esiKhokelo sithe, "Amaqela afana neTaglit-Birthright avunyelwe ukuba angene, kodwa ndicinga ukuba izokuma ngoku kuba ukuba abantu abavela eMelika, apho uninzi lwamaqela amaLungelo lokuzalwa bavela khona, kufuneka babe iintsuku ezisixhenxe zodwa, ndicinga ukuba abayi kuhlala bodwa iintsuku ezisixhenxe ngaphambi kokuba baqalise ukuhamba [ujikeleze uSirayeli]. ”
Amaqela angabakhenkethi angamashumi amabini anesibini avela e-US avunyiwe ukuba ahambe ngo-Agasti, isithethi se-Ofisi yoMphathiswa Wezokhenketho sixelele i-Media Line, songeza, nangona kunjalo, "kuyindalo ukuba, ngenxa yezithintelo ezitsha, kuyakubakho ukunciphisa inani labakhenkethi abafikayo. Kunzima kwesi sigaba sokuqala ukujonga ukuba ungakanani na umonakalo, kuba imeko inokutshintsha nanini na. ”
U-Oren, umphathi wehotele iRothschild kunye neDiaghilev e-Tel Aviv, uxelele iMedia Line ukuba bobabini abananto.
"Ndiyakuxelela ukuba, ngoku, uninzi lwabakhenkethi kwiihotele zethu ngabakwa-Israeli; akukho luninzi lwezokhenketho lwangaphandle, ”utshilo.
Xa ebuzwa malunga nethemba kumzi-mveliso wehotele kwa-Israyeli kamva kulo nyaka, u-Oren waphendula wathi, "Ndicinga ukuba siza kuvalela okwesine kwiinyanga ezimbalwa ezizayo."
Isibhengezo sikarhulumente siza njengoko uninzi lwe-COVID-19 lusasazeka ngakumbi kwilizwe liphela, nosulelo olutsha ngoku olungaphezulu kwe-3,000 ngosuku.
Ngamatyala amatsha afikelela kwi-32% yencopho kaJanuwari 16 kunye nokunyuka, iOfisi yeNkulumbuso ibhengeze ngoLwesibini ukuba izakuthathela ingqalelo amanyathelo afanelekileyo.
“Kunqande iindibano, kwaye uye kugonywa-ngoku. Ngaphandle koko, ayizukubakho enye indlela yokubeka imiqathango ebukhali, kubandakanya nokuvalela, ”utshilo u-Nkulumbuso uNaftali Bennett.
UMphathiswa wezoKhuselo uBenny Gantz, uqinise umyalezo wenkulumbuso, esithi, "Kufuneka silungiselele uluntu kunye noluntu izimvo zokuvalelwa ngoSeptemba, eyinyanga apho umonakalo woqoqosho uzakuba mbalwa [ngenxa yeeholide eziphezulu zamaJuda], kunye nokukhawulezisa iinzame zokugonya ukuzama ukukhusela.
UAron Rosenthal ungumfundi kwiYunivesithi yase-Edinburgh kunye nomsebenzi kwi-Media Line's Press and Policy Student Programme.
Eli nqaku lapapashwa okokuqala yiMediaLine.